၁၈ရက်နေ့မှာ ဈေးကွက်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတော့မယ့် အလန်းစား Huawei Nova 3. – ရှအေလငျး
၁၈ရက်နေ့မှာ ဈေးကွက်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတော့မယ့် အလန်းစား Huawei Nova 3.
လာမည့် ၁၈ရက်နေ့မှစတင်ပြီး Huawei က အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Nova3ဟာ
ဈေးကွက်ထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း Huawei P20ဖုန်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Kirin 70 chipset နဲ့အတူပွဲထွက်လာတဲ့အပြင် အရင်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအတိုင်း Ram 6GB နဲ့ Dual Camera တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် Nova series ထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်လဲမမှားပါဘူး။
Battery အနေနဲ့ 3750mAH ပါဝင်ပြီး Huaweiရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Huawei Super Charge ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ကြောင့် Huawei P20 ထက်တောင်သာလွန်နေပါတယ်။
Screen Size 6′ 3” နဲ့ Full HD resolution အသုံးပြုထားတာကြောင့် P20 Lite များလို့တောင်ထင်မှတ်ရတယ်။
ကင်မရာပိုင်းကတော့ Back Camera နှစ်လုံးအနေနဲ့ 16 MP RGB 24MP Monochrme ပါဝင်လာပြီး
Font Camera နှစ်လုံးအနေနဲ့ 24MP 2MP ပါဝင်လာတာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာရှင်တွေအတွက်
Android Oreo Version ကိုအခြေခံပြီး Lastest Vesion 8.2 အသုံးပြုထားပါတယ်။ 3D Qmoj လည်းပါဝင်လာမည့်အပြင် အခြားသော AI နည်းပညာတွေလဲထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အနက်၊ ခရမ်း၊ အပြာ၊ ရွှေရောင် ကာလာလေးမျိုးနဲ့ထွက်ရှိလာဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ မကြာခင် ၀င်ရောက်လာမှာဖြစ်လို့ Huawei ချစ်သူတွေကို သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
Kyaw Kyaw Khaing (နည်းပညာချစ်သူ)
လာမညျ့ ၁၈ရကျနမှေ့စတငျပွီး Huawei က အသဈထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Nova3ဟာ
ဈေးကှကျထဲ စတငျဝငျရောကျလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အားလုံးမထငျမှတျထားတဲ့အတိုငျး Huawei P20ဖုနျးမှာ အသုံးပွုထားတဲ့ Kirin 70 chipset နဲ့အတူပှဲထှကျလာတဲ့အပွငျ အရငျက ထှကျပျေါလာတဲ့ သတငျးတှအေတိုငျး Ram 6GB နဲ့ Dual Camera တပျဆငျထားတာကွောငျ့ Nova series ထဲမှာ အကောငျးဆုံး ဖုနျးတဈလုံးလို့ပွောရငျလဲမမှားပါဘူး။
Battery အနနေဲ့ 3750mAH ပါဝငျပွီး Huaweiရဲ့ ကိုယျပိုငျနညျးပညာဖွဈတဲ့ Huawei Super Charge ကိုထညျ့သှငျးထားတဲ့ကွောငျ့ Huawei P20 ထကျတောငျသာလှနျနပေါတယျ။
Screen Size 6′ 3” နဲ့ Full HD resolution အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ P20 Lite မြားလို့တောငျထငျမှတျရတယျ။
ကငျမရာပိုငျးကတော့ Back Camera နှဈလုံးအနနေဲ့ 16 MP RGB 24MP Monochrme ပါဝငျလာပွီး
Font Camera နှဈလုံးအနနေဲ့ 24MP 2MP ပါဝငျလာတာကွောငျ့ ဓာတျပုံရိုကျဝါသနာရှငျတှအေတှကျ
Android Oreo Version ကိုအခွခေံပွီး Lastest Vesion 8.2 အသုံးပွုထားပါတယျ။ 3D Qmoj လညျးပါဝငျလာမညျ့အပွငျ အခွားသော AI နညျးပညာတှလေဲထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ အနကျ၊ ခရမျး၊ အပွာ၊ ရှရေောငျ ကာလာလေးမြိုးနဲ့ထှကျရှိလာဖွဈပွီး ဈေးကှကျထဲမှာ မကွာခငျ ဝငျရောကျလာမှာဖွဈလို့ Huawei ခဈြသူတှကေို သတငျးကောငျးပါးလိုကျပါတယျ။
Kyaw Kyaw Khaing (နညျးပညာခဈြသူ)
ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး Android ဖုန်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ REDMI 5A
ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အခါ ဘာကြောင့် ဖုန်းပူတာလဲ။ ဖုန်းမပူအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
တစ်မိနစ်အတွင်း ရောင်းကုန်သွားတဲ့ Xiaomi Mi 8 ဖုန်း
မခံရပ်နိုင်အောင်နံလွန်းတဲ့ ရွှံ့အိုင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကို...
မိုက်ခရိုစကုတ်ပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ